Genghis खान को साम्राज्य: सीमाना, Genghis खान गरेको अभियान। Temujin (Genghis खान): इतिहास, सन्तान
अद्वितीय व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या विश्वका इतिहास छन्। तिनीहरू केवल बच्चाहरु थिए, अक्सर गरिबी हुर्केका छन् र असल बेहोरा थाहा थिएन। त्यस्ता मानिसहरूलाई मौलिक मात्र खरानी छोडेर, इतिहास को पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो। तिनीहरूले नयाँ विश्व, नयाँ विचारधारा र जीवन मा नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गरे। मान्छे मानिसजातिको यो पछिल्लो घटना एक मोशाको विकसित गरेको छ, किनभने आज आफ्नो जीवन owes यी सबै सयौं त्यहाँ आज छ कि entail। तिनीहरूले ओठ मा निरन्तर किनभने यी मानिसहरू को नाम, ठेगाना सबै। हरेक वर्ष, वैज्ञानिकहरू ठूलो मान्छे को जीवन देखि रोचक तथ्य को एक वृद्धि नम्बर प्रदान गर्न सक्छन्। साथै, बिस्तारै धेरै रहस्य र रहस्यहरुलाई, पहिले विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउन सक्छ जो धेरै को घोषणा खोल्नुहोस्।
Genghis खान को संस्थापक छ को Mongol साम्राज्य, तिनी जहाँ पहिलो ठूलो खान। उहाँले मङ्गोलिया को क्षेत्र मा थिए जो विभिन्न बिखरे कुल, एकताबद्ध। साथै, तिनीहरूले छिमेकी राज्य गर्न यात्राको को एक ठूलो संख्या सञ्चालन। सबैभन्दा सैन्य अभियान पूरा विजयमा समाप्त भयो। Genghis खान को साम्राज्य संसारमा इतिहासको सम्पूर्ण मा कन्टिनेन्टल को सबै भन्दा ठूलो मानिन्छ।
Temujin को पर्चा delüün boldog मा जन्म भएको थियो। बुबा केवल केटा को जन्म अघि द्वारा पराजित थियो सम्मान कैदी नेता Tatars Temudgin-Uge, आफ्नो छोरा Genghis खान भनिन्छ। विभिन्न स्रोतहरूबाट फरक अवधि संकेत रूपमा ठूलो नेता को जन्म मिति, अझै पनि ठीक ज्ञात छैन। नेता र तिनका साक्षी biographers जीवन समयमा अस्तित्व कागजातहरू अनुसार, Genghis खान 1155 मा जन्म भएको थियो। अर्को विकल्प - 1162 मा, तर कुनै सटीक प्रमाण। केटा पिता, Yesugei Bahadar, 11 वर्ष को उमेर मा दुलही को परिवार मा बाँया। Genghis खान भनेर छोराछोरीलाई प्रत्येक अन्य चिन्न उमेर सम्म त्यहाँ रहने थियो। साना केटी, नाम बोर्ड द्वारा भविष्यमा दुलही प्रकारको ungirat थियो।
आफ्नो बुबाको मृत्यु
धर्मशास्त्र अनुसार, घर फिर्ता बाटो मा, केटा पिता Tatars द्वारा विष थियो। घर मा त्यहाँ एक Esugeya ज्वरो थियो, र तीन दिन पछि मृत्यु भयो। उहाँले दुई पत्नीहरू थिए। आफ्नो दुई छोराछोरी, र परिवार को टाउको कुलका बाहिर kicked थियो। महिला र बच्चाहरु धेरै वर्ष को लागि वन बस्न बाध्य भए। केटाहरु माछा फसाउन प्रयास गरेका थिए, तिनीहरूले बिरुवाहरु खान: तिनीहरूले चमत्कार द्वारा भाग्न व्यवस्थित। को जाडो खाना लागि स्टक गर्न पर्छ रूपमा पनि न्यानो महिनामा तिनीहरूले अनिकालबाट गर्न, बर्बाद थिए।
महान् खान, कुलको Tarqutai नयाँ टाउको को reprisals राजकुमार भय राख्ने - Kiriltuh Temudgin अपनाए। धेरै पटक केटा भाग्न व्यवस्थित, तर अन्ततः उहाँले पक्रेको थियो। तिनीहरूले पूर्ण शहीद को कार्यहरू मा प्रतिबन्धित छ कि आफ्नो काठ ब्लक मा राखे। यसलाई खान, पिउन, वा पनि कष्टप्रद बग अनुहार देशबाट निकाल्नु असम्भव थियो। उनको स्थिति को आशाहीनता साकार, Temujin भाग्नु निर्णय गरे। राति, उहाँले ताल मिल्यो, कहाँ र लुकाउनु भएको थियो। केटा पूर्णतया nostrils मात्र सतह छोडेर पानी जोडतोडले। Snoop chiefdoms ध्यान भगुवा कम्तिमा केही निशान लागि देख्यो। एक व्यक्ति Temudgin remarked, तर यो दिनुभएन। पछि उहाँले भाग्न Genghis खान मदत गरे। चाँडै केटा जंगल मा आफ्नो घर फेला थियो। त्यसपछि उहाँले बोर्ड मा विवाह गरे।
एक कमान्डर बन्ने
Genghis खान को साम्राज्य बिस्तारै सिर्जना गरियो। सुरुमा उहाँले छिमेकी क्षेत्रहरूमा आक्रमण जो संग nukers गर्न बगालको गर्न थाले। तसर्थ, जवान आफ्नै भूमि, सेना र मान्छे देखा पर्न थाले। खान विशेष प्रणाली, प्रभावकारी बढ्दो तेजी गिरोह व्यवस्थापन गर्न अनुमति हुनेछ जो गठन गर्न थाले। बारेमा 1184 Genghis खान को पहिलो छोरा जन्मेको छ - Jochi। 1206 मा, Temujin को कांग्रेस मा परमेश्वरको महान खान घोषणा भएको थियो। यो बिन्दु बाट यो पूर्ण र निरपेक्ष शासक मङ्गोलिया छलफल भएको थियो।
मध्य एशिया को विजय धेरै चरणमा स्थान लियो। को Qara Khitai संग युद्ध सात नदीको र पूर्व Turkestan गर्न मङ्गोलिया संग समाप्त भयो। अर्डर जनसंख्याको समर्थन प्राप्त गर्न मा, Mongols सार्वजनिक उपासना Naiman निषेध छ मुस्लिम दिनुभयो। यो स्थायी बसे जनसंख्या पूर्ण आक्रमणकारिहरुमा संग रहयो भन्ने तथ्यलाई गर्न योगदान। जनसंख्या ", अल्लाह को अनुग्रह गरेर" Mongols को आगमन विश्वास खान Kuchluk को rigidity संग तुलना रूपमा। बासिन्दा आफूलाई Mongols गर्न ढोकाहरू खोल्न छन्। यो शहर Balasagun "कोमल शहर" भनिन्थ्यो लागि हो। हान Kuchlug उहाँले शहर भागे त, पर्याप्त बलियो प्रतिरोध संगठित गर्न असमर्थ। चाँडै, उहाँले फेला र मृत्यु भएको थियो। यसरी, Genghis खान को लागि Khorezm गर्न बाटो खोलेको छ।
मध्य एशिया मा एक ठूलो देश - Genghis खान को साम्राज्य Khorezm अवशोषित। यो को कमजोर बिन्दु को आचरण शहर मा पूर्ण शक्ति थियो थियो, त्यसैले स्थिति धेरै काल थियो। मुहम्मद आमा एक्लै बिना आफ्नो छोरा सोधेर, महत्वपूर्ण सरकार पोस्ट सबै परिवारका सदस्यहरूले नियुक्त। सिर्जना, यसरी, बलियो समर्थन एउटा सर्कल, त्यो मुहम्मद विरुद्ध विरोध भयो। Mongol आक्रमण को भारी खतरा हङ गर्दा आन्तरिक सम्बन्ध नराम्ररी तनावपूर्ण। को दल को कुनै पनि एक महत्वपूर्ण फाइदा प्राप्त छैन भन्ने तथ्यलाई माथि Khorezm विरुद्ध युद्ध। रात मा, Mongols को युद्धभूमिमा बाँकी। 1215 मा, Genghis खान आपसी व्यापार सम्बन्ध मा Khorezm संग सहमत भए। तथापि, Khorezm मा यात्रा गर्ने पहिलो व्यापारीहरू, कब्जा र मारिए। को Mongols लागि यो एक युद्ध सुरु गर्न सही क्षमा गर्नुहोस थियो। पहिले नै 1219 मा, मुख्य सैन्य सेना संग Genghis खान Khorezm विरोध गर्नुभयो। धेरै क्षेत्रमा कब्जाको द्वारा लिइएको थियो भन्ने तथ्यलाई बाबजुद Mongols हत्या र वरिपरि सबै विनाश शहर looted। मोहम्मद पनि लडाइँ बिना युद्ध गुमाए, र उहाँले यो, उहाँले द्वीप गर्न कैस्पियन सागर मा, आफ्नो छोरा jalal अल-दीन शक्ति दिइएको भएको पछि भागे बुझे। लामो लडाई पछि खान सिन्धुघाटीका नदी नजिकै 1221 मा पक्रेको jalal अल-दीन। शत्रु सेना लगभग 50 हजार मान्छे संख्यात्मक। तिनीहरूलाई सामना गर्न, Mongols चाल प्रयोग: को चट्टानी भू-भाग मा एक चक्कर बिताएपछि, तिनीहरूले शत्रु गरेको flank आक्रमण। साथै, खान शक्तिशाली गार्डस विभाजन Bagaturov mobilized छ। अन्ततः, jalal अल-दीन सेना लगभग पूर्ण तल भङ्ग भएको थियो। धेरै हजार सैनिकहरू पौडी खेल्न गर्न युद्धभूमिमा देखि भागे उहाँले थियो।
राजधानी को एक7महिना कब्जाको गिर पछि Khorezm - Urgench, शहर लगियो। Jalal अल-दीन Genghis खान 10 लामो वर्ष को सेना विरुद्ध लडेको, तर यो एक महत्वपूर्ण लाभ राज्य यसलाई ल्याए छैन। उहाँले एनाटोलिया मा 1231 मा आफ्नो क्षेत्रमा रक्षा मृत्यु भयो।
तीन छोटो वर्ष (1219-1221) Genghis खान अघि मुहम्मद धनुष राज्यमा। को कैस्पियन सागर गर्न सिन्धुघाटीका नदी देखि क्षेत्र कब्जा जो सम्पूर्ण पूर्वी राज्यको भाग, मङ्गोलिया को महान् खान को अधीनमा थियो।
पश्चिम Mongols द्वारा Jebe र Subedeya अभियान जितेको। समरकान्द कब्जा, Genghis खान मुहम्मद को विजय आफ्नो सेना पठाए। Jebe र Subutai इरानको उत्तरी सम्पूर्ण मार्फत पार गरेको छ र त्यसपछि दक्षिण काकेशस जफत। शहर केही अनुबंध द्वारा या बस शक्ति द्वारा कब्जा गरिएको थियो। सेना नियमित जनसंख्याको देखि आदर संकलित। चाँडै, 1223 मा Mongols नदी कालका मा रूसी-Polovtsian सैन्य सेना पराजित। तर, पूर्व गर्न retreating, तिनीहरूले हराएको को वोल्गा बुल्गारिया। को भारी सेना को साना रहन्छ 1224 मा महान् खान फर्के, र त्यो समय मा उहाँले एशिया थियो।
मङ्गोलिया बाहिर घटित खान पहिलो विजय, Tangut मा अभियान 1209-1210 वर्ष समयमा भयो। जस को स्थिति - हान पूर्व सबैभन्दा खतरनाक शत्रु संग युद्ध को लागि तयार गर्न थाले। 1211 को वसन्त मा ठूलो युद्ध, जो धेरै जीवन दावी छ थाले। धेरै छिटो, वर्ष को अन्त गरेर Genghis खान सेना इलाका चीन को महान पर्खाल गर्न उत्तर देखि स्वामित्व। 1214 मा पहिले नै Mongol सेना को हात मा यो उत्तर र पहेंलो नदी कवर, सारा इलाका थियो। त्यसै वर्ष त्यहाँ बेइजिङ को घेराबन्दीको थियो। विश्व विनिमय प्राप्त भएको थियो - Genghis खान एक विशाल दाइजो, भूमि र धन थियो जो आफ्नो पत्नी, रूपमा चिनियाँ राजकुमारी लिए। तर सम्राट गरेको कदम एक रूज थियो, र रूपमा चाँडै सेना सही क्षण प्रतीक्षा पछि, खान हटाउनुहोस् गर्न थाले रूपमा, चिनियाँ युद्ध फेरि सुरु गरियो। तिनीहरूलाई लागि यो Mongols को गति अन्तिम कंकड गर्न राजधानी पराजित किनभने, एक ठूलो गल्ती थियो।
मुहम्मद राजधानी - समरकान्द, Genghis खान को जेठो छोरा को गिरावट Khorezm पठाइएको थियो जब 1221 मा, क्रममा Urgench को घेराबन्दीको सुरु गर्न। एउटै समयमा कान्छो छोरा आफ्नो पिता द्वारा plunder र कब्जा क्षेत्रमा फारसका पठाइएको थियो।
हामी पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भएको कालका युद्ध, जो रूसी-Polovtsian र मङ्गोलियन सेना बीच भयो। आधुनिक युद्धमा क्षेत्र - युक्रेन को यो डोनेट्स्क क्षेत्र। कालका युद्ध (1223 साल) को Mongols पूरा विजय गर्न नेतृत्व गरेको छ। पहिलो तिनीहरूले Polovtsy सेना रूसी सेना को मुख्य शक्तिहरू नष्ट थिए भङ्ग, र पछि। 31 युद्धमा बारेमा9रूसी अगुवाहरू, धेरै boyars र योद्धाहरू को मृत्यु संग समाप्त होस्।
पदयात्रा Subutai Jebe र सेना को Cumans ओगटेको जो steppe, को एक महत्वपूर्ण भाग मार्फत जाने अनुमति दिनुभयो। यो, सैन्य सञ्चालनका भविष्यमा थिएटर को merits आकलन गर्न यो अध्ययन र व्यावहारिक रणनीति विचार कमान्डरहरु अनुमति दिएको छ। Mongolians पनि आन्तरिक तिनीहरूले उपयोगी जानकारी को धेरै पाएको कैदी देखि, रूस को संरचना बारे धेरै सिकेका छन्। Genghis खान गरेको अभियान सधैं होसियार भएको सामरिक प्रशिक्षण, को शुरू अघि सञ्चालन गरिएको।
रूस गर्न Tatars को आक्रमण शासन Chingizid Batu अन्तर्गत वर्ष मा भयो 1237-1240। Mongolians सक्रिय रूस मा अग्रिम, बाहिर, हिट फोटो अवसर लागि प्रतीक्षा गर्दै। को Tatars को मुख्य उद्देश्य disorganized डर र त्रास छरिरहेका, रूस को सैनिकहरु थियो। सैनिकहरू धेरै संग लडाई तिनीहरूले बच। चाल आफ्नो तेज आक्रमण र स्थिर आक्रमण थकित, एक ठूलो सेना विभाजन र piecemeal शत्रु पराजित भएको थियो। को Mongols धम्काउन गर्न र विचलित विरोधीहरूले काँडहरू फालिएको संग लड्न थाले। को मङ्गोलियन सेना को महत्वपूर्ण लाभ को एक युद्धमा व्यवस्थापन राम्रो तरिका व्यवस्थित थियो भन्ने तथ्यलाई थियो। व्यवस्थापकहरू सर्वश्रेष्ठ शत्रुता को हेर्ने कोण ढाक्न ताकि तिनीहरू एक निश्चित दूरी थिए, प्राकृतिक योद्धाहरू सँगसँगै लड्न थिएन। सैनिकहरू निर्देशन विभिन्न वर्ण दिएको: झण्डा, प्रकाश, धुवाँ, ड्रम र ट्यूब। ध्यान दिएर लाग्छ गर्न Mongols को आक्रमण। यो गर्न, यो एक शक्तिशाली बुद्धि र युद्धमा लागि कूटनीतिक तयारी सञ्चालन। धेरै ध्यान शत्रु को इन्सुलेशन, साथै सुनिंनु आन्तरिक द्वन्द्वबाट भुक्तानी भएको थियो। को मङ्गोलियन सेना को यो चरण पछि सीमाना नजिकै केन्द्रित थियो। आक्रामक भएको परिधि वरिपरि स्थान लियो। विभिन्न पक्षहरूसँग शुरू, सेना केन्द्र मा प्राप्त गर्न खोजे। गहिरो मर्मज्ञ, सैन्य, चोरी गाई सैनिकहरू हत्या, शहर नाश र महिला बलात्कृत। राम्रो आक्रमण लागि तयारी गर्न आदेश मा, Mongols शत्रु हतियार नष्ट रूपमा साथै इलाका तयार गर्ने, विशेष Supervisory टोली, बहिष्कार। जानकारी भिन्न रूपमा दुवै पक्षले सेना को सही नम्बर, मजबूती ज्ञात।
रूस Mongol आक्रमण लागि प्रमुख झटका थियो। जनसंख्याको एक विशाल भाग मृत्यु भएको थियो, शहर राम्ररी नष्ट भएको थियो रूपमा, जीर्णता फसे। पत्थर निर्माण धेरै वर्ष को लागि निलम्बित गरिएको थियो। धेरै शिल्प बस गायब। को बसे जनसंख्या लगभग पूर्ण liquidated थियो। को Mongols, यो एक धेरै स्वादिष्ट morsel थियो देखि Genghis खान र रस गर्न Mongol-तातार आक्रमण को साम्राज्य, राम्ररी गरिएको थियो।
Genghis खान गरेको साम्राज्य जापान को सागर गर्न डेन्यूब देखि एक विशाल क्षेत्र समावेश, र नोभगोरोड देखि दक्षिण-पूर्वी एशिया। यसको heyday समयमा, त्यो दक्षिणी साइबेरिया, पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व, चीन, तिब्बत र मध्य एशिया भूमि जोडती। XIII सताब्दी सिर्जना र Genghis खान को ठूलो राज्य पनप शुरुवात को। तर शताब्दीको दोस्रो आधा एक विशाल साम्राज्य Genghis खान द्वारा शासन गरिएको अलग ulus, मा अप तोड्न थाले। विशाल राज्य को सबै भन्दा महत्वपूर्ण टुकडे हो: सुनौलो गिरोह साम्राज्य युआन, Chagatai Ulus र Ilkhanate। तैपनि, साम्राज्य को सीमाहरु कुनै सामान्य वा विजेता थप गर्न सकेन त्यसैले प्रभावशाली थिए।
साम्राज्य को राजधानी
Karakorum साम्राज्य को राजधानी थियो। शाब्दिक, शब्द अर्थ "ज्वालामुखी को कालो पत्थर।" यो 1220. Karakorum मा स्थापित भएको थियो विश्वास छ। शहर खान अभियान र सैन्य मामिलामा आफ्नो परिवार छोडेर ठाउँमा थियो। साथै, शहर उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण राजदूतको लिए जसमा खान को निवास थियो। यो पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न रूसी अगुवाहरू आए। XIII शताब्दीमा शहर (मार्को पोलो, Rubruk डे प्लेनो Carpini) को एक रेकर्ड बाँकी छ जो संसारमा धेरै यात्री दिनुभयो। प्रत्येक चौथाई अन्य देखि छुट्टयाएर गरिएको छ रूपमा शहर जनसंख्या, धेरै motley थियो। शहर कालिगढहरु, सबै दुनिया भर आइपुगेका गर्ने व्यापारीहरू घर थियो। तिनीहरूलाई बीच विभिन्न जात, धर्म र विचार को मान्छे हो किनभने शहर, त्यहाँका बासिन्दाहरूले को विविधताको सर्तहरू अनुपम थियो। साथै, शहर मुसलमान मस्जिदों र मन्दिर बौद्ध धेरै संग बनाइएको थियो।
Ogedei उहाँले भनिन्छ जो एक दरबार, निर्माण "समुन्नतिको दस हजार वर्ष को महल।" प्रत्येक Chingizid पनि आफ्नो, जो, को पाठ्यक्रम दरबार यहाँ कमसल ठूलो नेता को छोरा निर्माण निर्माण गर्न भएको थियो।
Genghis खान आफ्नो दिन को अन्त अघि धेरै पत्नीहरू र concubines थियो। बोर्ड - तर, सबै भन्दा केटाहरू लागि शक्तिशाली र प्रसिद्ध कमान्डर पहिलो पत्नी छ ल्यायो। हकदार पहिलो छोरा Jochi, Batu, सुनौलो गिरोह को निर्माता थियो, Jaghatai-Chagatai लामो समय को लागि केन्द्रिय क्षेत्रहरु शासन गर्ने एक राजवंश नाम दिनुभयो, Ogaday-Ugedey 1259 द्वारा 1251 देखि खान को उत्तराधिकारी को Mongol साम्राज्यको Toluj नियम थियो। यी चार केटा र एक निश्चित शक्ति को राज्य मा थिए। Hodzhin बैग, Chichigan, Alagay, Temulen र Altalun: साथै, बोर्ड उनको श्रीमान् र छोरी जन्माइन्।
खान merkitka Hulan Khatun को दोस्रो पत्नी एक छोरी र छोरा Dayrusunu Kulkana र Harachara जन्म दिए। Genghis खान Esukat तेस्रो पत्नी उहाँलाई एक छोरी चारा star name-noynonu छोराहरू Chahura र Harhada दिनुभयो।
Genghis खान, जसको जीवन कहानी प्रभावशाली छ, गत शताब्दीको 20-एँ गर्न महान् खान Yasoy अन्तर्गत Mongols द्वारा शासन गर्ने आफ्नो सन्तान, द्वारा बाँचे छ। Emperors Manchurian 19 औं सताब्दी गर्न 16 देखि मङ्गोलिया र चीन भन्दा Sway कि, प्रत्यक्ष सन्तानहरू खान महिला लाइन थिए।
सूर्यास्त ठूलो साम्राज्य
साम्राज्य को पतन 1269 मा 1260 देखि, लामो9वर्ष लामो थियो। को सबै शक्ति जानेछ जलिरहेको प्रश्न थियो अवस्था, धेरै काल थियो। साथै, यो नियन्त्रण एकाइ द्वारा सामना गम्भीर प्रशासनिक समस्या उल्लेख गर्नुपर्छ।
साम्राज्य ड्रप Genghis खान छोराहरू को कि आफ्नो पिता द्वारा स्थापित कानून अनुसार बाँच्न चाहेनन् कारण लागि भयो। तिनीहरूले मुख्य अभिधारणा लाइभ सकेन "क्यू-कठोरता राज्य बारे।" Genghis खान निरन्तर निर्णायक कदम लागि उहाँबाट माग कि क्रूर वास्तविकता गठन। स्थायी जीवन Temudgin आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक वर्ष देखि अनुभव। तिनका छोराहरूलाई एक पूर्ण बिभिन्न वातावरण बस्थे तिनीहरूले सुरक्षित र भविष्यमा विश्वस्त छन्। साथै, हामी तिनीहरू treasured सरसम्पत्ति पिता आफैले भन्दा धेरै सानो गरेको छन् बिर्सनु हुँदैन।
राज्य पतन अर्को कारण Genghis खान छोराहरू बीच एक शक्ति संघर्ष भएको छ। यो राज्य को जरुरी मामिलामा तिनीहरूलाई distracts। यो महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समाधान गर्न आवश्यक थियो, भाइहरूले आफ्नो merits वाद मा लगे। यो तर देश मा स्थिति, वैश्विक स्थिति, मान्छे को मूड छैन असर गर्न सक्छ। यो सबै धेरै पक्षमा राज्य मा एक सामान्य गिरावट गर्न पुगे। एक पिताको साम्राज्य बीच साझेदारी, भाइहरूले यो कि रक्स मा dismantled नष्ट भन्ने महसुस गरेनन्।
ठूलो नेता को मृत्यु
Genghis खान, जसको इतिहास मिति प्रभावशाली छ, मध्य एशिया बाट फर्के पश्चिमी चीन मार्फत आफ्नो सेना गए। क्सी Xia सीमानाहरू नजिकै 1225 मा, Genghis खान जो समयमा गिर र नराम्ररी bruised, एक शिकार थियो। उही दिन को साँझ द्वारा उहाँले उच्च ज्वरो थाले। एक परिणाम रूपमा, बिहान यो कि वा छैन Tangut एक युद्ध सुरु गर्न को प्रश्न सम्बोधन जो प्रबन्धकहरू एक बैठक, convened। बोर्ड मा उहाँले पनि नियमित आफ्नो बुबाको निर्देशन देखि भटक शक्ति विशेष भरोसा को शिखर मा प्रयोग गरिन्छ जो Jochi थियो। यस्तो स्थिर व्यवहार देखेर Genghis खान को Jochi विरुद्ध जाने र उसलाई मार्न आफ्नो सेना आदेश दिए। तर किनभने आफ्नो छोराको मृत्युको मार्च र गरेको छैन।
1226 को वसन्त मा, Genghis खान र आफ्नो सेना क्सी Xia सीमा पार, उनको स्वास्थ्य सुधार। को रक्षक पराजित, र शहर plunder दिइएको छ पछि, खान आफ्नो अन्तिम युद्ध सुरु भयो। Tanguts पूर्ण खोल थियो कि Tangut राज्य बाटो को सरहद मा पराजित गरेका थिए। ठूलो नेता यहाँ मृत्यु किनभने Tangut खान र मृत्यु को राज्यका गिरावट, धेरै जडान छन्।
धर्मशास्त्र उहाँले Tangut राजा उपहार प्राप्त गरेपछि Genghis खान को मृत्यु आए भन्छन्। तर, अवस्थित एक बराबर हक जो धेरै संस्करण हो। रोग बाट मृत्यु, क्षेत्र को जलवायु गरिब मिलाइएको, घोडा बाट झर्ने को प्रभाव: मुख्य र सम्भवत कारण बीचमा निम्न छन्। खान उहाँले शक्ति द्वारा लिए जसलाई आफ्नो जवान पत्नी, मारिए भनेर छुट्टै संस्करण पनि छ। केटी, नतिजा भय राख्ने, एउटै रात आत्महत्या।
Genghis खान को चिहान
महान् खान को दफन को सही ठाउँमा जो कोहि कल गर्न सक्दैन। विभिन्न स्रोतहरूबाट धेरै कारण hypotheses मा असहमत। यसबाहेक, प्रत्येक जो विभिन्न ठाउँ र दफन को तरिका निर्दिष्ट गर्दछ। को Altai खान वा Yehe-UTEK को उत्तर पक्षमा, Burkhan Khaldun मा: Genghis खान को चिहान तीन ठाउँमा कुनै पनि हुन सक्छ।
Genghis खान स्मारक मङ्गोलिया मा स्थित छ। इक्वेस्ट्रियन मुर्ति संसारमा सबै भन्दा ठूलो स्मारक र मुर्ति मानिन्छ। स्मारक को उद्घाटन ठाँउ, 2008 लिए सेप्टेम्बर 26। यसको उचाइ 40 मिटर जसको उचाइ 10 मिटर छ स्तम्भ, बिना छ। सबै मुर्ति लेपित स्टेनलेस स्टील, कुल वजन 250 मिटर छ। साथै स्मारक Chingizkhanu 36 स्तम्भहरू घेरिएको। ती प्रत्येक Mongol साम्राज्य, Chinggis सुरूवात को खान र अन्त्य Ligdenom प्रतिनिधित्व गर्दछ। साथै, दुई-मंजिल्ला स्मारक र त्यहाँ एक संग्रहालय, कला, पूल, रेस्टुरेन्ट, एक सम्मेलन कोठा र एक स्मारिका पसल छ। घोडा टाउको आगंतुकों लागि हेर्दै मञ्च हो। मुर्ति द्वारा एक ठूलो पार्क घेरिएको छ। एक गोल्फ कोर्स, एक आउटडोर थिएटर र कृत्रिम ताल निर्माण गर्न शहर अधिकारीहरु योजना।
Vyacheslav Molotov (Vyacheslav Mihaylovich Skryabin): जीवनी, राजनीतिक क्यारियर
रूसी राजा। रूसी tsars को इतिहास। पछिल्लो रूसी Tsar
पनडुब्बी भ्लाडिभास्तोक मा "एस-56": इतिहास, फोटो
"प्राग स्प्रिंग" - एउटा क्रान्तिमा वा षडयंत्र?
म एक कम्पास किन चाहिन्छ? यसको मूल र व्यावहारिक आवेदन इतिहास।
एडवर्ड पारंगत: जीवनी र फोटो भौतिक
Kalanchoe: निको गुणहरू र संस्कृति को प्रयोग
कार मा विवाह सजावट। रूपमा मूल आफ्नो कार सजाउनु?
पुरानो तातार बन्दोबस्त। कजान आकर्षण
संग टाइप2मधुमेह दारिम सम्भव छ वा छैन? लाभ र दारिम स्वास्थ्य हानि
कोमल - यो ... "कोमल" को अर्थ
योजना: कसरी गर्मी लागि sundress सी गर्न
के एउटा बच्चा (2 वर्ष) अक्सर उठ्दै चिल्ला राति सुत्न छैन भने?
बशिक्षित सुन्दरता (सेबको रूख): विविध किसिमको वर्णन र बगैचाहरूको समीक्षा
कहाँ र कहिले gunpowder आविष्कार?
हुन्डई सोलरिस - समीक्षा र विवरण
टुनिस - विदेशी र पूर्व सौन्दर्य
रूपमा "पकाउने रैक के Maynkraft मा: निर्देशन